အဆစ်များ- ၎င်းတို့သည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အရေးပါမှု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 11/11/2021 17:40 | ဘူမိဗေဒ
အ ညှပ်များ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် မြေပြိုမှုများနှင့် မတွဲနိုင်သော ကျောက်တုံးများတွင် ကျိုးသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် ကျောက်ဖြစ်သည်။ သာမန်အရှိဆုံးအရာမှာ အနိမ့်ဆုံး transverse ခြားနားခြင်း ဖြစ်သည် ။ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် အတုံးများ ချော်ထွက်ခြင်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည့် ကျိုးကျသော ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ခွဲခြားထားသည်။ အဆစ်များသည် သဘာဝတွင် အလွန်ပေါများသော ကျောက်များ၏ ပျက်စီးလွယ်သော ပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ cleats၊ ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုဆက်ကပ်ပါမည်။
5 ရှုံးနိမ့်မှုများနှင့် ကွဲပြားမှုများ
အခြားဘူမိဗေဒဖွဲ့စည်းပုံများကဲ့သို့ပင်၊ အဆစ်များ၏ ဦးတည်ရာကို ဘောင်နှစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြသည်-
လိပ်စာ: မြောက်-တောင်ဝင်ရိုး နှင့် မြောက်-တောင်ဝင်ရိုးပါရှိသော အလျားလိုက်မျဉ်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ထောင့်။
ရေဆင်း- အဆစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ထောင့်နှင့် စိတ်ကူးယဉ် အလျားလိုက် လေယာဉ်။
အဆစ်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပြားနေရန် မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန် ဂျီဩမေတြီ ပုံသဏ္ဍာန်ကို တုံ့ပြန်ရန် မလိုအပ်သောကြောင့် ညွှန်ပြထားသော ဘောင်များသည် အချက်တစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အဆစ်များသည် အများအားဖြင့် သီးခြားမဟုတ်သော်လည်း ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ကွဲလွဲမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။. ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အဆစ်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အဆစ်များရှိပါက ၎င်းကို articular system သို့မဟုတ် "joint system" ဟုခေါ်သည်။
Parallel cleat စနစ်: အဆစ်များအားလုံးသည် တူညီသောဦးတည်ချက်နှင့် ယိုင်လဲမှုရှိသည်။
ဖြတ်ထားသော အဆစ်စနစ် ညှပ်များသည် မတူညီသော ဦးတည်ရာများနှင့် ထောင့်များပါရှိသောကြောင့် အချို့သောနေရာများတွင် ဖြတ်ကြသည်။ အဖြစ်အများဆုံးကိစ္စမှာ အများအားဖြင့် conjugated joints မိသားစုတစ်ခုဖြစ်ပြီး တူညီသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်း (ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိသိပ်မှု) မှ အဓိကအဆစ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခု သို့မဟုတ် သုံးခုကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
Compression Joint နှင့် Distension Joint များအကြား ပိုင်းခြားရန်၊ Joint သည် လုံလောက်သော အချက်အလက် (groove သို့မဟုတ် displacement) ကို မစွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် local သို့မဟုတ် regional deformation ၏ အဓိကဝင်ရိုးကို လေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ချဲ့ထွင်ခြင်းအဆစ်များတွင်၊ အထင်ရှားဆုံးမိသားစု၏ဦးတည်ချက်သည် ချဲ့ထွင်ခြင်း၏ဦးတည်ချက်တွင် အများအားဖြင့် ထောင့်မှန်ဖြစ်ပြီး compression joints တွင်၊ ၎င်းသည် အဆစ်ကိုဖြတ်သည့်စူးရှသော bisector ၏ ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည်။
မြေပြင်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် တွန့်ကြေစေသော တွန်းအားများကဲ့သို့သော ဦးတည်အင်အားစုများ အပါအဝင် ၎င်းတို့ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ ချည်နှောင်ခြင်းအတွက် အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုသည် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သည် (တိုးပွားသိပ်သည်းဆ) ၏ ထုထည်ပမာဏ ကျဆင်းသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း, မြုပ်ပြီးနောက် လေထဲတွင် ကျန်နေသော အနည်များအဖြစ်။
ရေခဲသေတ္တာ၊ basalt colonnades နှင့်တူသည်။ ၎င်းတို့ကို basalt စီးဆင်းမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ ချော်ရည်များ ခိုင်မာသွားသည်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အအေးခံခြင်းဖြင့် basalt စီးဆင်းမှုသည် ပရမ် (columnar separation) အဖြစ်သို့ ကွဲသွားပါသည်။ အိုင်ယာလန်ရှိ Giant's Causeway သို့မဟုတ် Los Órganos de La Gomera သည် ဤကိစ္စ၏ လူသိများသော ဥပမာများထဲမှ အချို့ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။. အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပစ္စည်းများတွင်၊ ပုံဆောင်ခဲကွန်ရက်များကို ချဲ့ထွင်ကာ အက်ကြောင်းများဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ယခင်ကိစ္စများတွင်ကဲ့သို့ ပစ္စည်း၏သိပ်သည်းဆကို တိုးမြင့်စေသည့် မော်လီကျူးများကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းအား နှစ်သက်သဘောကျသည်။
နှိမ့်ချမှု။ ၎င်းသည် တိုက်စားမှုမှ ထွက်ပေါ်လာသော ယမ်းစိမ်းပလူတိုကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် တွဲစပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စပိန်ဗဟိုတွင် ber mooes သို့မဟုတ် berrocales ဟုခေါ်သော ဖွဲ့စည်းမှုများ စတင်ပုံဖြစ်သည်။
ညှပ်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ရေနုတ်မြောင်းပုံစံနှင့် ကမ်းရိုးတန်းပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် အရေးကြီးပြီး ၎င်းတို့သည် ကျောက်တုံးထုအတွင်းသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ရေလမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် တိုက်စားမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ပူးတွဲကျောက်တုံးများသည် အရည်မှစိမ့်ဝင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရေတိမ်ပိုင်းများ သို့မဟုတ် ကျောက်ဆီ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်သည့်ကျောက်တိုင်များအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး သတ္တုတွင်းလုပ်သားများသည် ချိတ်ဆက်မှုကို သေချာဂရုပြုထားသောကြောင့် ၎င်းတို့ရောက်ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် မရှိခြင်းသည် သင့်လုပ်ငန်းကို တိုးတက်မှု သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
Compression နဲ့ tension cleat တွေကို ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့၊ ဒေသဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း ပုံပျက်ခြင်း၏ အဓိကဝင်ရိုးကို လေ့လာသင့်သည်။ကုတ်ပြားကိုယ်တိုင်က လုံလောက်တဲ့အချက်အလက် (groove သို့မဟုတ် offset) မပေးနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ချဲ့ထွင်ခြင်းကိစ္စတွင်၊ အထင်ရှားဆုံးမိသားစု၏ဦးတည်ချက်သည် ချဲ့ထွင်ခြင်း၏ဦးတည်ချက်နှင့်အညီဖြစ်ပြီး ဖိသိပ်မှုတွင်၊ ၎င်းသည် အဆစ်ကိုဖြတ်သွားသော စူးရှသော bisector ၏ ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည်။
ချဲ့ထွင်ခြင်း။ ၎င်းတို့သည် အအေးခံခြင်း (မီးသင့်ကျောက်များ၊ ကော်လံပုံသဏ္ဍာန်) သို့မဟုတ် အခြောက်ခံခြင်း (အနည်ကျကျောက်များ) ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည့် ကျောက်ထုပေါ်တွင် သက်ရောက်နေသော ဖိစီးမှုစနစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
နှိမ့်ချမှု။ စတိုးစနစ်သည် အထူးသဖြင့် ကျောက်တုံးများကဲ့သို့သော မီးသင့်ကျောက်များ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများတွင် မျက်နှာပြင်နှင့် အပြိုင် အနည်းအများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
၎င်းတို့သည် ဝန်ပို၍ တိုက်စားသွားသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် ကျောက်တုံးထုအတွင်း စွန့်ပစ်မှုများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
Tectonics- ကျောက်တုံးအတွင်း ခေါက်ခြင်း သို့မဟုတ် တွန်းခြင်းများ၏ တိုက်ရိုက်ရလဒ်အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် စနစ်သုံးခုကို လက်ခံသည်- ဝက်ဝံ၊ ခေါက်၏ဝင်ရိုးနှင့်အပြိုင်၊ ယိုင်လဲခြင်းစနစ်၊ လည်ချောင်းများဆီသို့ ထောင့်ဖြတ်ကာ၊ ထောင့်ဖြတ်ညှပ်များ ပေါင်းစပ်ထားသော စနစ်သည် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၏ ဦးတည်ချက်တွင် 45° အောက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ပေါ်နေပါသည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ conjugate system ကိုဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စုနှစ်ခုသည်မညီမညာဖြစ်လာသည်။ ဤစနစ်များတွင် အမြင့်ဆုံး shear ၏ သီအိုရီပိုင်းအရ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် "shear joint" ဟူသော ဝေါဟာရကို အသုံးပြုထားသည်။
ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များကို ယေဘူယျအားဖြင့် ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာတွင် တွေ့ရသော အက်ကွဲကြောင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး သာမန်မျက်စိဖြင့် သို့မဟုတ် လေထုမှ ကြည့်ရှုနိုင်လောက်အောင် ကျယ်ပြန့်သော နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုအချို့ရှိသည်။ အမှားများ၏ အကျယ်သည် စင်တီမီတာအနည်းငယ်မှ ကီလိုမီတာများစွာအထိ ကွဲပြားနိုင်သည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ San Andreas ပြတ်ရွေ့ကဲ့သို့သော ပြတ်ရွေ့များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမှ မီတာရာနှင့်ချီ၍ ရွေ့လျားနိုင်ပြီး တောင်တန်းစနစ်များဖွဲ့စည်းမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ မြေကို ပိုင်းခြားထားသော ပြတ်ရွေ့မှာ အကွက်နှစ်ကွက်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခံရသည့် အကွက်များဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင် လည်ချောင်းများကို တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ချို့ယွင်းချက်များကို ထုတ်ပေးသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ချော်လဲမှုကို အထောက်အကူပြုသော ကျိုးပဲ့မှုသာဖြစ်သည်။ ငလျင်လှုပ်ခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် tectonic plates များ၏ အစွန်းအချို့ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် သင် cleats နှင့် ၎င်းတို့၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » အဆစ်